Dowladda Imaaraadka Oo ciidamadeeda kala baxaysa Yaman. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dowladda Imaaraadka Oo ciidamadeeda kala baxaysa Yaman.
Last updated Jun 29, 2019 446 1
Ciidamo Imaaraad ah oo jooga Yemen.
Warar isasoo taraya oo aad loo hadal hayo ayaa xaqiijinaya in dowladda Imaaraadka Carabta ay billowday in ciidamadeeda qaar kala baxdo magaalooyinka dhaca koonfurta Yaman, ee ay duulaanka kusoo qaaday sanadkii 2015-ka.
Masuuliyiin sar sare oo katirsan Imaaraadka, ayna soo xiganeyso wakaaladda Reuters ayaa xaqiijiyay dhaq-dhaqaaqa milliteri ee bixitaanka ah, islamrkaana dowladooda ka billowday koonfurta Yaman.
Dad ku sugan magaalada Cadan oo ah magaala labaad ee ugu weyn Yaman, ayaa sheegaya in dowladda Imaaraadka Carabta ay magaalada ka saartay inta badan gawaarida gaashaman ee ciidanka, kuwaas oo la geeyay dekadda Cadan, halkaas oo ay ka qaadeen maraakiib xamuul ah.
Dad badan oo reer Yaman ah ayaa ku doodaya in tallaabadan ay dowladda Imaaraadka Carabta qaaday ku dooneyso iney ku wanaajiso sumcadeeda ku wasakhowday faragelinta qaawan ee ay ku sameysay wadanka Yaman, tan iyo markii kooxda Xuuthiyiintu la wareegtay magaalada Sancaa.
Magaalada Cadan oo keliya ma ahan meelaha ay dowladda Imaaraadku kala baxday askarteeda, inta badan magaalooyinka ku dhirirsan xeebaha galbeed ee Yaman ayaa laga daad gureeyey ciidamo iyo gawaari dagaal oo badan.
Khubarada ka faallooda arimaha milliteriga waxay sheegayaan in tani ay muujineyso cadaadiska ay dareemeyso dowladda Imaaraadka Carabta, maadaama xiisad iyo xurguf xoogan ay ka jirto mandiqadda, taas oo u dhexeysa Maraykanka iyo xulafadiisa oo dhinac ah iyo dowladda shiicada ah ee Iiraan.
Inkastoo dhaq-dhaqaaqa bixintaanka iyo dhimista ciidamada Imaaraadka ee Yaman uu yahay mid muuqda oo aan la dafiri Karin, hadana weli waxaa jira ciidamo Imaaraad ah iyo malleeshiyaad iyaga daacad u ah oo ku sugan Cadan iyo magaalooyinka lamidka ah.
Reer Yaman oo qaati ka taagan hab dhaqanka dowladda Imaaraadka ee ku dhisan xadgudubka iyo dulmiga, ayaa ku hanjbay iney si toos ah isaga dhicinayaan ciidamada Imaaraadka, oo ay ku tilmaameen iney yihiin gumeysi doon.
Magaalooyinka qaar ee dhaca koonfurta Yaman, waxaa ka dhacay dagaallo xoogan oo dhexmaray qabaa’ilka muslimiinta ah iyo ciidamada Imaaraadka, taasina waxay dowladda Imaaraadka dareensiisay sida ay reer Yaman u neceen.
Imaaraadku, wuxuu qeyb ka yahay isbaheysi carbeed oo uu horboodayo maamulka Aala-Sucuud, kaas oo duqeymo joogta ah oo dad shacab ah ku dhamaadeen ka fulinaya wadanka Yaman, dowladda Imaaraadkana waxaa u dheer damacyo fog oo ku dhisan dhul boob, waxayna gacanta ku dhigtay inta badan magaalooyinka ku teedsan badda Cas iyo khaliijka Cadan.
imaaradka bax dheh waa dal cadaw ku ah yaman iyo muslimiintaba